Calawiyiinta oo iska dheereeyay Assad - BBC News Somali
Calawiyiinta oo iska dheereeyay Assad
4 Abriil 2016
Image caption Calawiyiinta Suuriya ayaa xiriir la leh Bashar al Assad iyo aabihiis Hafez markii uu talin jiray.
Talaabo aan caadi ahayn, hogaamiyayaasha dhaqanka iyo diinta ee mathabta Calawiyiinta ee Suuriya ee madaxweyne Bashar al- Asad uu ka mid ayahay ayaa soo saaray waraaqo ay heshay BBC, oo ay iska dheeraynayaan dowladiisa. Waxay sheegaysaa waxa ay la rabaan mustaqbalka waddanka kadib shan sano oo dagaal socday.
Hogaamiyayaasha dhaqanka iyo kuwa diinta ayaa sheegay inay rajaynayaan inay iftiimiyaan Calawiyiinta kadib waqti dheer oo ay qarsoodi ku jireen, waxa ay ugu yeereen "waqti muhiim ah" Taariikhdooda.
Waraaqo siddeed bog ah, oo loogu yeeray "ku dhawaaqid isbadal", Calawayiinta ayaa sheegay inay matalaan habka saddexaad ee Islaamka dhexdiisa.
Image caption Magaalada Latakia ee xeebta ayaa xarun u ah Calawiyiinta Suuriya.
Dadka qoray waraaqaha ayaa sheegay in Calawiyiinta aysan ka mid ahayn Shiicada Islaamka, sida ay ku tilmaameen waqtigii hore wadaadada Shiicada, iyo inay ka go'an tahay la dagaalanka dagaalada ku salaysan madhabta diimaha.
Waxay sidoo kale cadeeyeen inay u hogaansamaan qiimaha sinaanta, xoriyada iyo wadan u dhalashashada. Waxayna ugu baaqayaan in mustaqbalka Suuriya uu noqdo mid diinta iyo siyaasada ay kala soocan tahay, iyo hab dowladnimo oo Islaamka, Kiristaanka iyo diimaha kale ay siman yihiin.
Inkastoo Calawiyiinta ay u badnaayeen dowladda Suuriya iyo ciidamada dowladda Assad iyo aabihiis Hafez markuu xukunka hayay in kabadan afartan sano, waxay sheegeen aqoonsiga dowladda Assad in la lagu tixgalinayo oo kaliya sida ay tahay domoqraadiyada iyo xaquuqda aasaaska.